မအောင်မြင်ဘဲ နှုတ်ဆက်သွားရတဲ့ တရုတ် နည်းပညာနဲ့ ထုတ်ကုန် ၁၀ မျိုး - PX
NFC (Near Field Communitaion) နည်းပညာနဲ့ ဆင်တူတဲ့ HotKnot ကို Goodix က ၂၀၁၃ မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အများစုက MediaTek နည်းပညာလို့ ယူဆခဲ့ကြပြီး အကြောင်းပြချက်က MTK Processor တွေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Using HotKnot Sample (Photo: Gearbest)
HotKnot သုံးသူတွေဟာ ဖိုင်ရှဲချင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်း ၂ လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုရုံနဲ့ ရှဲနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ဒေတာကူးပြောင်းနှုန်းဟာ တစ်ခါတရံ မတရားနှေးတယ် ဆိုပါတယ်။ Bluetooth နဲ့ ယှဥ်ရင်တောင် ပိုနှေးတဲ့ ပြဿနာမျိုးရှိခဲ့တဲ့အတွက် HotKnot ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။
2. PumpExpress 4.0
Qualcomm Quick Charge နည်းပညာနဲ့ ဆင်တူတဲ့ PumpExrpess ဆိုတာဟာလည်း Fast Charging နည်းပညာ တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ PumpExpress 4.0 နာမည်နဲ့ ကြေညာခဲ့ပြီး HotKnot လိုမျိုး MediaTek Processor နဲ့ပဲ အသုံးပြုနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ HUAWEI ၊ Xiaomi ၊ Vivo ၊ OPPO နဲ့ OnePlus တို့တတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် Fast Charging နည်းပညာ အသုံးပြုနေကြတဲ့အတွက် အလာကောင်းပေမယ့် အခါနှောင်းသွားတယ်လို့ သုံးသပ်ရပါမယ်။
3. Xiaomi Mi 5C (Surge 1)
Mi 5C ဟာ Xiaomi ရဲ့ ပထမဆုံးသော ကိုယ်ပိုင် Processor (Surge S1) အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မတ်လမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Octa-core အမျိုးစားဖြစ်တဲ့ Mi 5C စမတ်ဖုန်းဟာ ဒေါ်လာ ၂၅၀ တန် Mid-Range တန်းမှာ ဝင်ဆံ့ခဲ့ပါတယ်။
Photo: Gizomo China
၅ လက်မအရွယ် Full HD မျက်နှာပြင်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Mi 5C တဖြစ်လည်း Surge S1 ဟာ Xiaomi အတွက် အောင်မြင်မှုတွေ မပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Android 8.0 (Oreo) နဲ့ MIUI9အဆင့်မှာသာ ရပ်တန့်နေခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း Surge S2 ဒုတိယမျိုးဆက် Processor ဆက်မထုတ်ခဲ့ပါဘူး။
တရုတ်သမိုင်းမှာတော့ LeEco ကုမ္ပဏီဟာ အကြွေးများစွာနဲ့ ဆုံးဆုံးမြုပ်ခဲ့ရတဲ့ အမဲစက်ကြီးအဖြစ် ထင်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ တည်ထောင်သူ Jia Yueting မှာလည်း စီးပွားရေး မပြေလည်တဲ့အပြင် အကြွေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့တယ်။
ကုမ္ပဏီ ပျက်ကပ်ဆိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ စမတ်တီဗွီ၊ စမတ်ကား၊ Android နည်းပညာသုံး စမတ်စက်ဘီးစတဲ့ စမတ်နည်းပညာတွေနဲ့ အာရှ ၊ ပစိဖိတ်ဒေသ စျေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးပမ်းတာကနေ အစပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
LeEco Smartphone (Photo: Android Authority)
ပြဿနာတွေထဲက အမေရိက တီဗွီထုတ်လုပ်သူ Vizio ကို ဝယ်ယူဖို့ ကြံစည်တာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့အထိ အရှုံးသမား လုံးလုံးဖြစ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိမတိုင်ခင်မှာတော့ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကျင်လည် နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး စမတ်တီဗွီ၊ စမတ်ကား စသဖြင့် အကိုင်းခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ ဇာတ်သိမ်းသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
OnePlus2Fail သွားတာကို ထောက်ပြရင် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အထာမနပ်တဲ့ အနေထားမှာ ရှိခဲ့မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုက Next Generation မှာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရိုးထုံးစံရှိတယ်ဆိုမယ့် Feedback နားထောင်ပြီး ထုတ်တာမျိုး နည်းပါတယ်။
OnePlus2(Android Authority)
ဒီထဲမှာ OnePlus တင်မဟုတ်ဘဲ ထင်ရာဆိုင်းနေတဲ့ Sony လည်း အပါဝင်ဖြစ်ပြီး လိုရင်းဆက်ရမယ်ဆိုရင် Flagship Killer ဖြစ်လာရမယ့် ဖုန်းဟာ NFC မပါ (OnePlus One ကို စော်ကားခြင်း) ၊ နှေးကွေးတဲ့ Fingerprint ကြောင့် Fans တွေ မှန်းထားတာနဲ့ တလွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အပူပြဿနာရှိနေတဲ့ Snapdrgaon 810 SoC လည်း အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Android7တင်ဖို့တောင် OnePlus ငြင်းဆန်ခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။
6. Meizu Pro5(Ubuntu Edition)
Ubuntu စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ – ၁၆ ကာလတွေမှာ Ubuntu Class High-end ဖုန်းဆိုတာ မြင်ရခဲပါတယ်။ Meizu အနေနဲ့လည်း UX4 Ubuntu Edition အခြေနေကောင်းပြီးမှသာ စျေးကွက်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုမယ့် ပြဿနာအစ ဘယ် App က လိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Meizu Pro5(Photo: Vox-cdn)
အဓိက ကြုံရတာ Developer Support နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ App တွေ မရှိတာက အသေသတ်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး High-end တွေ ချည်းသုံးထားပေမယ့်လည်း OS ကိုယ်တိုင်က နှေးကွေးနေတဲ့အတွက် တိမ်ကောသွားခဲ့တယ် ဆိုရပါမယ်။
ပထမဆုံး Core ၁၀ လုံး (Tri Cluster 2+4+4) Processor ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း Core ၁၀ လုံး သုံးရင် ပိုမြန်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်လင့်စောင်းစားနေခဲ့ပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာတော့ လုံးပါးပါးခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၇ ထုတ် စမတ်ဖုန်းတွေမှာ တပ်ဆင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Helio X30 ဟာ ထုတ်လုပ်ပြီးချင်း ၆ လ အတွင်းမှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Processor မှာ Performance Issue ရှိနေတာကို MediTek ကိုယ်တိုင် Technical ပိုင်း မထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် OPPO ၊ Vivo ၊ Xiaomi ၊ LeEco နဲ့ DOOGEE တို့ မပါဝင်တော့ဘဲ Meizu နဲ့ Vernee ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Meizu Pro7၊ Vernee Apollo2ဖုန်းတွေမှာသာ Helio X30 Processor ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
8. Slider Phones
FullView Display ခေတ်ထစေတဲ့ ၂၀၁၈ မှာ Slider Phones တွေကို ခရေဇီ ဖြစ်ကျတာ မှတ်မိနေမယ် ထင်ပါတယ်။ FindX ကစလို့ Mi Mix3၊ Lenovo Z5 Pro နဲ့ Z5 Pro GT ၊ Honor Magic2တို့ အစဥ်လိုက် ထွက်ခဲ့ပေမယ့် သက်တမ်းနုတဲ့ ပန်းပွင့်လို ၁ နှစ်ပြည့်တာနဲ့ ကြွေလွင့်ခဲ့ပါတယ်။
မြင်သာအောင် ပြောရရင် Slider ဒီဇိုင်းကို ၂၀၁၉ မှာ အသုံးပြုခြင်းမရှိသလို အလားတူ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Pop-up Mechanism သုံးလာပါတယ်။ နောက်တမျိုး ကင်မရာကို အရှေ့ရော အနောက်ရော သုံးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်သူတွေ Slider ဒီဇိုင်းကို ဆက်မသုံးတော့တာ သိသာပါတယ်။
မျက်နှာပြင် ၂ ခုပါ စမတ်ဖုန်း အများစုဟာ Fancy ဖြစ်တယ်ဆိုမယ့် လက်တွေ့မှာ Screen ၂ ခုကို တပြိုင်နက်ထဲသုံးမယ့် App ရော Multi-tasking အရရော လက်တွေ့မဆန်သေးပါဘူး။
၂၀၁၇ ထုတ် Meizu PRO7မှာ ၂ လက်မ အရွယ် AMOLED Secondary Display သုံးထားတယ်ဆိုမယ့် Feedback တွေအရ လုပ်ဆောင်ချက်နည်းတယ်၊ Secondary Display မပါဘဲနဲ့လည်း သုံးနိုင်တဲ့ အနေထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Vivo NEX ၊ Nubia X တို့ ဆက်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် Popular မဖြစ်ခဲ့ရပါဘူး။
Vivo NEX (Photo: Nasi Lemak Tech)
ယုတ်စွအဆုံး Galaxy Fold နဲ့ Mate X တွေတောင် နည်းပညာ အခက်ခဲမျိုးစုံကို တစ်နှစ်လောက် ရင်ဆိုင်ရပြီးမှ ရောင်းချတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိကြားထဲ Flexpai ဖုန်းတောင် ဘယ်ရောက်သွားခဲ့ရသည် မသိရသေးပါဘူး။
Zero Hero လို့ ပနံရအောင် သုံးတတ်ပေမယ့် Meizu ကတော့ Port-less စမတ်ဖုန်းအဖြစ် နာမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းတစ်ခုလုံး ဘာ Port တစ်ခုမှ မပါရလေအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပြီး အားသွင်းဖို့ကို Wireless Charging သုံးတယ်။
Meizu Zero (Photo: Engadget)
အသံ အတွက် In-display Sound နည်းပညာသုံးတယ်၊ Physical SIM ပေါက်မပါတဲ့အတွက် eSIM ကိုသာ အားထားခဲ့ရပြီး Volume Control ၊ Power ခလုတ်တွေအတွက် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီက Linear Sensor ကို သုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကို ဒေါ်လာ ၁,၂၉၉ နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပြီး CEO “Jack Wong” အဆိုရ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက် ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် အလုံး ၁၀၀ ပြည့်အောင်တောင် မထုတ်ခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Credit: Habeeb Onawole (GizmoChina)